गण्डकी गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा सम्पन्न, कुल ६३ करोडको बजेट विनियोजन (कुन शिर्षकमा कति बजेट?) – kalikadainik.com
गण्डकी गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा सम्पन्न, कुल ६३ करोडको बजेट विनियोजन (कुन शिर्षकमा कति बजेट?)
बिहिबार, आषाढ ३१, २०७८ | २१:०५:१७ |
रबि रेग्मी, गोरखा । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले कुल ६३ करोड ४६ लाख ४९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६३ करोड ४६ लाख ४९ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको हो । पालिकाले चालू तर्फ ३४ करोड १७ लाख ९४ हजार र पुँजीगत तर्फ २९ करोड २८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ ओटा वडाको लागि ८ करोड ५७ लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै पालिका भित्रका सडक निर्माण तथा मर्मतको लागि १ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा ३० लाख, कृषि शाखा ५० लाख, विपद तथा कोरोना नियन्त्रणको लागि ७० लाख र प्राविधिक ल्याव निर्माणको लागि १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तैगरि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि २ करोड ५० लाख, वडा नं ६ र ८ को वडा कार्यलय निर्माणको लागि क्रमशः ७० र ६५ लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका आफैले जेसिबी र टृपर खरिदको लागि क्रमशः ५० र ४५ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका स्तरको योजनाको लागि ५ करोड ५४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आज बसेको गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बहुमतले पारित गरेको छ ।
पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम भन्ने असार १० गते नै ल्याएको थियो । स्थानिय तहले असार १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तसम्म गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार गण्डकी गाउँपालिकाले पनि आज नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गरेको छ ।